"Planet amagugu": ukudlula amazinga 408, iseluleko
Lo mdlalo "Planet amagugu" idlula 408 ezingeni akuyona waba nzima kakhulu. Kodwa umehluko wemisindo nemiqondo yamagama kuleli qophelo kuyinto. Okuningi mayelana nabo, kuzoxoxwa ngakho esihlokweni.
Hlobo luni mdlalo?
Ngaphansi kwaleli gama, amanga omunye zokusebenza zeselula ezithakazelisayo kakhulu, ngokuhlanganisa e yena izakhi "ukwakhiwa" uhlobo, futhi "izikhathi ezintathu zilandelana." Okungukuthi, umdlali uzobe "ahlukeneko" amatshe nangebala ku inqwaba, ukuze zinyamalale kanye endaweni yabo "ihlaselwe" amasha. Asinakusho ukuthi umdlalo iyona kuphela into efana nayo, ngoba ezihlukahlukene ezifana enkulu mini-games. Omunye enhle kunabanye. Kodwa onjiniyela baye bazama kakhulu ukuhlobisa it, engeza izinhlamvu nemibandela izakhiwo ezithakazelisayo. Futhi kukhona totems pumpable futhi amathuba ukulahlekelwa njalo amabhonasi.
Uhlelo lokusebenza okuye kungase kutholakale isikhathi yimpumelelo njengoba uchwepheshe killer. Akunakwenzeka ukubala inani lamahora nsuku ukuchitha izigidi zabantu kule game, ikakhulukazi emi esiminyaminyeni sezimoto noma bangazihluphi ngokwabo ngento izinkulumo isidina. Omunye yezinto ezithakazelisa kakhulu izigaba "Planet amagugu" yomdlalo - 408 amazinga.
Lolu hambo akuyona eziyinkimbinkimbi kanjalo. Kubalulekile ukuqonda ukuthi amabhonasi cosmic elise strip elingaphezulu, iwe, lapho kuningi iwe. On ukudlula inikezwe izinyathelo eziyishumi kuphela, futhi amabhonasi ingasetshenziswa eziyisishiyagalombili eziyisikhombisa kuphela, futhi omunye ukulengiswa kusukela phezulu itholakala imizuliswano ekuseni (ezansi ngakwesokudla).
Lo mdlalo "Planet amagugu" Ukudlula ezingeni 408 lingachazwa nge izinyathelo ezilandelayo:
Ukuqalisa ibhonasi jikelele e usaqala (idinga ukuya phezulu);
actuation we "Umbani", ewa umugqa phezulu eshintshashintshayo ngakwesobunxele;
kubalulekile ukulinda kuze kube inhlanganisela igcwaliswe amabhonasi, okwaphumela ukusebenza kwawo "umbani";
ewa amabhonasi phezulu kudingeka ukuhambisa kuze kufike ohlangothini lwesobunxele, baze bonke ekwindla.
Kugcine ukuba sigudluke phansi noma kuqhunyiswa. Futhi, ungasebenzisa totem, wabe esekhonza iminyaka umdlalo Ukudlula "Planet amagugu" (Izinga 408) uyonika izinkanyezi ezintathu.
Mangithi ukuthi inhlanganisela zamisa ayisona kuwuphawu wedwa. Noma yimuphi umdlali ucishe savvy uyakwazi beveza inhlanganisela liya evumela kudlule alolu isheshe.
Fire Totem efiselekayo ekhiphela up ezingeni lesihlanu, kodwa kungenziwa kuphela emva 410 esiteji of the game. Ngenxa kunconywa ukumba igolide. Lesi sakamuva unikeza omningi we 408 ezingeni, ukuze sikwazi uhambe ngalo izikhathi ezimbalwa ilandelana, bese kuphela ukuhamba kujana ekwakhiweni kwezakhiwo, uzotshala totems kanye nokuthuthukiswa izigaba ezintsha futhi eziyinkimbinkimbi (hhayi).
Njalo ngehora emhlabeni, izigidi zabantu isiminyaminya sezimoto, miss izinkulumo nokukhandleka phezu engathandwa, imisebenzi ungakujabulisi enza abaholi babo. Ngenxa izicelo ezifana "Planet amagugu", neqhaza ukuphakamisa ikhono lokusungula, athula angokomzwelo nangokwengqondo. Isikhathi ukuthuthukisa isu lalo kudlule ezingeni elithile, ngokwanele. Ngakho-ke, kufanele nje ukwabelana uqaphela futhi isitokwe sokubekezela ukubona amaphethini.
Indlela yokwenza i-dynamite e Minecraft nokuthi ukuyisebenzisa
Indlela ukulanda umculo kusukela "Thola"? impendulo yethu
Hlobo luni izimbali akufanele ibekwe ekhaya noma ulondoloze impilo futhi izimpilo yekhaya
Ukufakwa yokupaka izinzwa kuya "Kalina": izandla zabo
Olugcwele imithambo zobuchopho: izimpawu kanye Izindlela zokwelapha
Neoplasm kwengqondo - Iyini?
Fish-indoda, owesifazane-inhlanzi: uhlamvu, ezempilo, phetho
Balaklava, umkhumbi-ngwenya ikheli isizinda, izithombe